Sahia miavaka | Chaîne d'honnêteté
16/12/2019 22/01/2020 par Tiana Fanantenana Razafindrakoto
“Midirà amin’ny vavahady èty ianareo” (Matio 7. 13 a)
Ambaran’i Jesoa mazava fa misy vavahady roa samy hafa mitondra amin’ny lalana roa mifanohitra eo amin’ny fiainantsika, ny iray mitondra amin’ny fahaverezana ary ny iray mankany amin’ny fiainana. (Matio 7: 13-14)
Satana fahavalontsika dia milofo fatratra hangalatra ny fiainana be dia be nahafatesan’i Jesoa ho antsika, mitady ny hamono sy handringana antsika izy hiainantsika fiainana tsy misy fiainana (Jaona 10:10). Mampiasa ny nofontsika sy ny tontolo manodidina antsika izy hanosika antsika hihazakazaka hiditra ny vavahady malalaka mitondra any amin’ny lalan’ny fahaverezana.
Tsy ho tafiditra amin’io toeram-piasana na toeram-pianarana io ianao raha tsy manome vola ny mpiandraikitra ao, tsy ho vita io taratasy ataonao io….Toa dia efa izay ny fiainana fa tsy misy azo atao. Fitaky ny fahavalo izany hitondrany anao any amin’ny fahantrana lalina kokoa. (Efesiana 6: 11)
Tsarovy fa ny Fanahin’i Jesoa ao anatinao dia Fanahy mahery manome anao ny fahefana hisafidy. Mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. (Deotoronomia 30: 19)
Sahia miditra amin’ny lalana tery fa miantoka anao ny Tompontsika!
Tiana Fanantenana Razafindrakoto
Nahoana no voakapoka mafy izao tontolo izao ?
Tonom-bavaky ny miady mafy!
Mpitondra tsiro sy fahazavana
Matokia an’i Jehovah ianao
La mission de la Chaîne est de briser le cercle la corruption à Madagascar.